AMBOARY NY PLAYSTATION 'NISY LESOKA NITRANGA' TAMIN'NY FIDIRANA - MALEMY
Ny kaody hadisoana dia malaza pesky, fa ny tsy fananana kaody hadisoana mihitsy dia mety hampahatezitra kokoa. Mora ihany ny mamaha ny lesoka nahazo anao na amin'ny console na amin'ny fitaovana hafa amin'ny alàlan'ny fikarohana an-tranonkala tsotra ny kaody hadisoana. Saingy amin'ity tranga ity dia tsy misy fampahalalana betsaka momba ny lesoka omena ny mpampiasa.
Ity lesoka tsy fantatra anarana ity dia mety ho mpitsidika matetika ny console PlayStation 4 anao satria misy hafatra somary mampivadi-po Nisy lesoka nitranga ary tsy misy fampahalalana hafa. Matetika io lesoka io dia miseho rehefa mandefa ny PS4 anao na manandrana miditra amin'ny piraofilinao PSN. Indraindray dia mety hiseho izy io eo am-panovana ny kaontinao, fa tena mahalana mandritra ny lalao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia handeha amin'ny fomba maro hamahana ny lesoka PlayStation tsy misy kaody hadisoana izahay.
Ahoana ny fomba hanamboarana ny PlayStation misy lesoka nitranga (tsy misy kaody lesoka)?
Fomba 1: hamarinina sy havaozy ny fampahalalana momba ny kaonty PSN anao
Fomba 2: Manaova kaonty PSN vaovao mampiasa adiresy mailaka vaovao
Fomba 3: Midira ao amin'ny kaontinao avy amin'ny console hafa
Fomba 4: Ovao ho ‘Tsy Misy’ ny fametrahana ny fiainanao manokana
Fomba 5: ovao ny fametrahana ny Domain Name System (DNS) anao
Fomba 6: Esory ny tadin'ny herinaratra
Fomba 7: Alefaso na avereno alefa ny fanamarinana roa dingana
Na dia manjavozavo sy tsy mazava aza io hadisoana io dia misy fomba vitsivitsy mazava sy mora hamonoana azy. Ny famafana ny kaonty PSN anao dia hanao ny fikafika ho an'ny ankamaroany raha ny hafa kosa mety mila manandrana mampiasa ny kaontiny amin'ny console hafa. Ny fametrahana ny tariby herinaratra fotsiny na ny fanovana ny fikirana DNS dia vahaolana mety ihany koa. Ny fomba tsirairay voalaza etsy ambany dia tsotra sy haingana, mba hahafahanao miverina milalao ny lalao tianao indrindra.
PlayStation Network (PSN) mitahiry sy mampifangaro ny antsipirian'ny fiainanao manokana ary ahafahanao miantsena an-tserasera handefa kilalao, sarimihetsika, mozika ary fampisehoana.
Ny lesoka dia azo inoana fa noho ianao nirohotra nanomboka nilalao tamina console vao novidiana nefa tsy nanamarina ny kaontinao PSN aloha. Ny fanamarinana sy fanavaozana ny mombamomba ny kaontinao dia mety hanampy amin'ny fisorohana an'ity kaody diso ity ary manampy anao hiditra amin'ny lafiny manokana amin'ny tambajotra.
ny fomba hahatonga ny google chrome hihazakazaka haingana kokoa amin'ny windows 10
Araho ny dingana eto ambany hanavaozana sy hanamarinana ny fampahalalana momba ny kaonty PSN anao hamahana ity olana ity.
Dingana 1: Ao amin'ny solosainao na telefaonanao dia sokafy ny boaty mailakao. Hamarino tsara fa ianao dia miditra amin'ilay adiresy mailaka nampiasaina hametrahana ny kaonty PSN anao.
Dingana 2: Ao amin'ny boaty mailakao, tadiavo ny mailaka nalefan'ny PlayStation. Afaka manao izany mora foana ianao amin'ny fikarohana ' Sony ’Na‘ PlayStation ’Ao amin'ny bara fikarohana.
Ny mailaka dia hangataka ny fanamafisana ny adiresy mailakao, raha hanao izany, tsindrio fotsiny ilay rohy miraikitra ao amin'ny mailaka. Raha vao nanamafy ianao dia tsy tokony hahazo an'ity lesoka ity intsony.
Fanamarihana: Raha elaela no lasa hatramin'ny nananganana ny kaontinao PSN dia mety ho tapitra ny rohy. Amin'izay dia afaka miditra ianao Tranokalan'ny PlayStation ary mangataha rohy vaovao.
Ny olana ao amin'ny mpizara PlayStation Network dia mety hiteraka tsy ahafahan'ny mpampiasa manamarina ny kaontiny. Ny famoronana sy fidirana amin'ny kaonty vaovao dia tena hanitsiana izay lesoka rehetra. Raha vao avy nividy console vaovao ianao dia tsy ho olana lehibe izany satria tsy ho very ny fandrosoanao. Aza hadino ny manamarina ny kaonty vaovao ara-potoana sy tsara alohan'ny hampiasana azy.
1. Atombohy ny PlayStation anao ary mizaha ny tenanao mankany amin'ny faritra 'Mpampiasa Vaovao'. Press ' Mamorona Mpampiasa ’Na‘ User 1 ’amin'ny efijery fidirana PlayStation. Hamorona mpampiasa eo an-toerana amin'ny PlayStation io fa tsy kaonty PSN.
2. Safidio ny ‘ Manaraka 'Arahin'ny' Vaovao amin'ny Network PlayStation? Hamorona kaonty'.
3. Ankehitriny, tsindrio ‘ Midira izao '.
4. Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra 'Skip' dia afaka miroso mivantana milalao ilay lalao ivelan'ny seranana ianao. Aza adino, amin'ny alàlan'ny fitetezanao ny tenanao amin'ny avatar anao eo amin'ny efijery an-trano ny console anao dia afaka misoratra anarana amin'ny PSN ianao avy eo.
5. Mizotra mankany amin'ny mombamomba ny User 1 raha vao sambanao mampiasa ny PlayStation anao. Mila mampiditra ny antsipirihanao tsara sy marina ianao, tsindrio ny ‘ Manaraka ’Bokotra isaky ny efijery vaovao.
6. Ankoatry ny mombamomba anao manokana dia mila mampiditra ny safidinao ihany koa ianao raha te hino manokana ny kaontinao. Anisan'izany ny fizarana, fandefasana hafatra ary ny safidin'ny namana.
7. Raha latsaky ny 18 taona ianao dia avela hilalao amin'ny maody ivelan'ny Internet ihany. Mila fahazoan-dàlana avy amin'ny olon-dehibe ianao hahafahan'ny maody an-tserasera. Manoro hevitra anao mafy izahay tsy hiditra amin'ny daty nahaterahana diso hidirana amin'ny maody an-tserasera raha tsy ampy taona ianao satria mifanohitra amin'ny fepetra fampiasana ilay fitaovana.
8. Raha mihoatra ny 18 taona ianao, dia eo am-panaovana ny fomba fandoavam-bola dia tokony hitovy amin'ilay iray nampiasana tamin'ny faktioran'ny karatrao ny adiresy niditra. Izany dia hisorohana ny lesoka sy ny olana hafa tsy tonga.
9. Rehefa miditra ny adiresy mailakao ianao dia alao antoka fa io no nidiranao, satria ho azonao a rohy fanamarinana tsy ho ela . Raha tsy afaka mahita mailaka avy amin'ny ekipa PlayStation ianao, zahao indray ny spam na folder junk indray mandeha . Tadiavo ny mailaka amin'ny alàlan'ny fanoratana ny 'Sony' na 'PlayStation' ao amin'ny bara fikarohana. Araho ny rohy hamoronana vaovao ID amin'ny Internet amin'ny fampidirana ny anaranao sy ny anaranao. Tadidio fa ho fantatry ny besinimaro io anarana io ary hitan'ny hafa.
Raha mbola tsy mahita ilay mailaka ianao dia safidio ny ‘ Vonjeo ’Hanova ny adiresy mailaka anao indray na angataho ny PlayStation anao handefa ny mailaka indray. Safidio ‘ Midira amin'ny Facebook ’Hampifandray ny PSN amin'ny kaontinao Facebook.
Raha fantatrao ny olona iray izay manana console PlayStation 4 koa, ity fomba manokana ity dia manampy. ny amboary ny PlayStation Misy lesoka nitranga, midira vetivety amin'ny console an'ny olon-kafa. Azonao atao ny mizara ny antsipirian'ny kaonty amin'ny namana atokisanao ary mangataka azy ireo hivoaka amin'ny azy manokana ary hiditra ao amin'ny anao mandritra ny fotoana fohy.
Windows 10 mpanampy niraikitra tamin'ny 99
Manoro hevitra anao izahay fa eo amin'ny lafiny ara-batana mandritra ny fizotrany ary miditra ao amin'ny kaonty ianao satria io no fomba azo antoka indrindra hahazoana antoka fa tsy voarohirohy ny fampahalalana sy ny teny miafina momba ny kaonty. Rehefa afaka kelikely, dia mivoaha avy ao amin'ny kaontinao avy amin'io console io ary midira ao amin'ny console anao manokana ary zahao raha manamboatra ilay olana ve izany.
Recommended: Fomba 7 hanamboarana ny hatsiaka sy ny lagging PS4 (PlayStation 4)
Ny mpihazona kaonty dia afaka mametra mora foana ny fisehoan'izy ireo amin'ireo mpampiasa PlayStation Network hafa amin'ny fanovana ny sehatra fiainany manokana. Ity dia vahaolana ho an'ny olana maromaro hafa saingy misy ny mpampiasa sasany nitatitra izany mety ho fanamboarana ny ankehitriny. Manova ny toerana misy anao manokana ho lasa ‘ Tsy misy olona ’Dia mendrika hotifirina satria afaka mamaha ity olana ity maharitra. Ity fomba fanovana toerana ity dia mora sy tsotra ihany.
1. Alefaso ny console anao ary mankanesa any amin'ny ‘ an-trano ’Menio. Tsindrio ny kisary gear mba hanokafana ny ‘Settings’.
2. Raha vao ao amin'ny menio Settings, tsindrio ny 'Network PlayStation'. Ao amin'ny menio ambany dia tsindrio ny 'Management Account' ary avy eo ' Fikirana tsiambaratelo ’. Eto dia mety tsy maintsy ampidirinao ny teny miafin'ny PlayStation ID.
latabatra fizarana mbr ho an'ny gpt
3. Safidio tsirairay avy ireo fiasa tianao hanovana ny toe-javatra miafina ary ovay ho ‘ Tsy misy olona ’. Ohatra, eo ambanin'ny 'Fizarana ny zavatra niainanao' dia ahitanao ny 'Hetsika sy amboara' hahitanao ny safidy hanovana azy ho ' Tsy misy olona ’. Toy izany koa amin'ny 'Connecting with Friends' izay ahafahanao manova ny toe-javatra ho 'Friends of Friends', 'Friends Requests', 'Search', ary 'players You may Know'. Tohizo ny zavatra mitovy amin'ny 'Fiarovana ny mombamomba anao', 'Safidy hafatra', ary 'Fitantanana ny lisitry ny namanao'.
4. Ankehitriny, miverena amin'ny menio lehibe ary avereno atsangana ny console PlayStation anao raha te hahavita ianao amboary ny PlayStation Misy lesoka nitranga.
Ny Domain Name System (DNS) dia mihetsika toy ny phonebook ho an'ny internet. Azontsika atao ny miditra amin'ny vaovao misy amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny anarana isan-karazany (toa izao dia mampiasa ‘troubleshooter.xyz’) ianao. Mifandray amin'ny fampiasana adiresy Internet Protocol (IP) ny mpizaha tranonkala. DNS dia mandika sehatra amin'ny adiresy IP mba hahafahan'ny browser-nao miditra amin'ny Internet sy loharano an-tserasera hafa.
Ny fanovana sy fanovana ny fifandraisanao amin'ny Internet dia afaka mitazona ny lakile hisorohana an'io lesoka io. Izany no ovay ny adiresy DNS ny fifandraisanao amin'ny Internet amin'ny adiresy DNS misokatra nataon'i Google manokana. Mety hanamboatra ilay olana izany ary raha tsy izany dia ny fikarohana Google tsotra dia hanampy anao hahita ny adiresy Open DNS mety.
Raha mahazo ity lesoka ity ianao raha manandrana milalao ny lalao ary tsy misy kaody fanampiny hadisoana eo akaikiny, ny fomba voalaza etsy ambany no fomba tsara indrindra hamahana ilay olana. Mpampiasa marobe no nahita an'ity vahaolana ity manampy amin'ny lalao isan-karazany, indrindra amin'ny lalao toa ny Rainbow Six Siege an'i Tom Clancy.
1. Raha vao mipoitra eo amin'ny console anao ny lesoka dia mandehana mankany amin'ny menio Settings ary tadiavo ny safidin'ny ‘Account Management’. Tsindrio ny 'Hivoaka' mba hialana amin'ny kaontinao.
2. Ankehitriny, vonoy tanteraka ny console PlayStation 4 anao.
3. Vantany vao voahidy tanteraka ny console, avy ao ambadiky ny console, esory moramora ny tadin'ny herinaratra.
4. Tazomy ho tapaka mandritra ny fotoana fohy ny console, 15 minitra no hanao ny tetika. Ampidiro tsara ao amin'ny PS4 ny tariby herinaratra ary avereno indray.
5. Midira ao amin'ny kaontinao indray raha vantany vao manomboka ny console ary jereo raha hainao amboary ny PlayStation Misy lesoka nitranga.
Vitsy ny mpampiasa nitatitra fa ny fampandehanana sy famerenana indray ny fomba fiasa fiarovana roa dingana ho vahaolana tonga lafatra sy mora. Raha mbola tsy azo ampiasaina, dia ny fitanisana fotsiny ny safidy no manao ny fikafika.
Ny rafitra fanamarinana 2-dingana dia miaro ny mpampiasa amin'ny fidirana tsy ilaina amin'ny alàlan'ny fahazoana antoka fa ianao irery ihany no afaka miditra amin'ny kaontinao amin'ny PlayStation Network. Amin'ny ankapobeny, isaky ny mahita fidirana vaovao ao amin'ny rafitrao ianao dia hahazo hafatra an-tsoratra miaraka amina kaody fanamarinana izay hapetraka raha manandrana miditra ianao.
Vakio ihany koa: Ahoana ny famindrana ny Microsoft Office amin'ny solosaina vaovao?
tsy misy feo aorian'ny fanavaozana ny windows
Ny dingam-panovana ny fanovana fanamarinana 2-Dingana dia mora, araho fotsiny ny fomba voalaza etsy ambany.
Dingana 1: Mandehana mankany amin'ny ' Fitantanana kaonty ’Safidy ao amin'ny menio Settings. Tsindrio ny 'Fampahalalana momba ny kaonty' ary avy eo ny 'Security' ao amin'ny menio ambany. Raha efa azo ampiasaina dia tsindrio ny safidy 'Status', ary ao amin'ny menio mitete-midina, safidio ny 'Inactive' ary avy eo 'Confirm'. Atsaharo ny fitaovana ary avelao indray.
Dingana 2: Midira amin'ny fampahalalana momba ny kaontinao (raha mbola tsy nanao izany ianao). Mitadiava ny ‘ Atsangano izao Bokotra 'hita eo ambanin'ny' Fanamarinana 2-Dingana 'ary kitiho eo.
Dingana 3: Ao amin'ny boaty pop-up, ampidiro tsara ny nomeraon-telefaoninao ary tsindrio ny ' hametraka ’. Raha vao ampidirina ny nomeraonao dia hahazo kaody fanamarinana amin'ny findainao ianao. Ampidiro amin'ny efijery PS4 ity kaody ity.
Dingana 4: Manaraka izany, hivoaka amin'ny kaontinao ianao ary hahazo efijery fanamafisana. Vakio ny fampahalalana an-tsary ary alaharo ny dianao mandroso. Avy eo, kitiho 'OK' .
diso toerana ny mpanonta ahy
Windows 10 vaovao farany miandry ny fisintomana
tsy misy Bluetooth ao amin'ny foibe fihetsika
ethernet default gateway tsy misy
ampifandraiso amin'ny kaonty microsoft ny varavarankely
misokatra hatrany amin'ny chrome ny takelaka